Iindaba -Ungazikhetha njani izinto zokubopha ukutya okwenziwe ngokwezifiso?
Uyikhetha njani into eblack bag yokupakisha ukutya customized
Ngokubanzi, le migaqo ilandelayo isebenza kukhetho lwezixhobo zokupakisha ukutya.
Kuba ukutya kunamabanga aphezulu, aphakathi kunye asezantsi kuxhomekeka kuluhlu kunye nendawo ekusetyenziswa kuyo, amabakala ahlukeneyo ezinto okanye uyilo kufuneka akhethwe ngokwamabakala ohlukeneyo okutya.
2. Umgaqo wesicelo
Ngenxa yokwahluka kunye neempawu zokutya, zifuna imisebenzi eyahlukeneyo yokukhusela. Izinto zokupakisha kufuneka zikhethwe ukuhambelana neempawu ezahlukeneyo zokutya ezahlukeneyo kunye neemeko ezahlukeneyo zokuhamba. Umzekelo, izinto zokupakisha zokutya okukhukhumeleyo zifuna ukusebenza okuphezulu komoya, ngelixa ukupakisha kwamaqanda kufuna ukuthuka. Ukutya okubanda ngamaqondo obushushu aphezulu kufuneka kwenziwe ngezinto ezinokumelana nobushushu obuphezulu, kunye nobushushu obuphantsi bokutya okubandayo kufuneka kwenziwe ngezinto zokupakisha ezinobushushu obuphantsi.Oko kukuthi, kufuneka sithathele ingqalelo imeko zokutya, zemozulu (imeko yendalo), Iindlela zokudlulisa kunye namakhonkco (kubandakanya ukujikeleza) kukhetho lwezixhobo zokupakisha. Iimpawu zokutya zifuna ukufuma, uxinzelelo, ukukhanya, ivumba, ukungunda, njl.Imozulu kunye nokusingqongileyo kubandakanya ubushushu, ukufuma, umahluko wobushushu, umahluko wokufuma, uxinzelelo lomoya, ukwenziwa kwegesi emoyeni, njl.njl. yezothutho (abantu, iimoto, iinqanawa, iinqwelomoya, njalo njalo) kunye neemeko zendlela. Ukongeza, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo iimfuno ezahlukeneyo zamazwe ahlukeneyo, ubuzwe kunye nemimandla yokupakisha ukuze yamkele ukwamkelwa kweemarike kunye nabathengi.
3. Umgaqo-siseko wezoQoqosho
Izinto zokupakisha kufuneka ziqwalasele ezazo uqoqosho. Emva kokuthathela ingqalelo iimpawu, umgangatho kunye nenqanaba lokutya okuza kupakishwa, uyilo, imveliso kunye nezinto zentengiso ziya kuthathelwa ingqalelo ukufezekisa elona xabiso liphantsi. Iindleko zempahla yokupakisha ayihambelani kuphela nexabiso lokuthenga kweemarike, kodwa ikwahambelana nokuqhubekeka kweendleko kunye neendleko zokuhambisa. Ke ngoko, izinto ezahlukeneyo kufuneka zithathelwe ingqalelo ekukhetheni eyona nto ifanelekileyo ekukhetheni uyilo lokupakisha.
Izinto zokupakisha zineendima ezahlukeneyo kunye neentsingiselo kwiindawo ezahlukeneyo zokupakisha ukutya okufanayo. Ngokwendawo eyiyo, ukupakishwa kwemveliso kunokwahlulwa kube yangaphakathi, ukupakishwa okuphakathi kunye nokupakishwa kwangaphandle. Ukupakishwa kwangaphandle ikakhulu kumela umfanekiso wemveliso eza kuthengiswa kunye nokupakishwa kwishelufu yonke. Ukupakishwa kwangaphakathi yiphakheji eza ngokunxibelelana ngqo nokutya. Ukupakishwa phakathi kokupakisha kwangaphakathi kunye nokupakisha kwangaphandle kukupakishwa okuphakathi. Ukupakisha kwangaphakathi kusebenzisa izinto zokupakisha eziguqukayo, ezinje ngezinto ezithambileyo zeplastiki, iphepha, ifoyile yealuminium kunye nezinto zokupakisha ezidityanisiweyo; Izinto zesixhobo se-buffer ezineepropathi zokugcina izinto zisetyenziselwa ukupakisha okuphakathi； Ukupakisha kwangaphandle kukhethwe ngokweempawu zokutya, ikakhulu ikhadibhodi okanye iibhokisi. Ifuna uhlalutyo olupheleleyo ukufezekisa iimfuno zokusebenza kunye neendleko zoqoqosho ukuthelekisa kunye nokulungelelanisa iindima zezixhobo zokupakisha ukutya kunye nokupakisha.
5. Umgaqo we-Esthetic
Xa sikhetha into yokupakisha, kufuneka siqwalasele ukuba ingaba ukutya okupakishwe ngale nto kungathengisa kakuhle. Lo ngumgaqo wobuhle, eneneni indibaniselwano yobugcisa kunye nokubonakala kokupakisha. Umbala, ukuthungwa, ukungafihli, ukuqina, ukutyibilika nokuhonjiswa komphezulu wezinto zokupakisha ngumxholo wobugcisa wezinto zokupakisha. Izinto zokupakisha ezibonisa amandla obugcisa liphepha, iplastiki, iglasi, isinyithi kunye neseramikhi, njl.
Umgaqo 6. wesayensi
Kuyimfuneko ukukhupha izinto ngokwentengiso, ukusebenza kunye nezinto ezisetyenziswayo ukuze ukhethe izinto zokupakisha ngokwesayensi. Ukukhethwa kwezinto zokupakisha ukutya kufuneka kusekwe kwiimfuno zokulungiswa kunye neemeko zezixhobo zokulungisa, kwaye kuqala kwisayensi nakwindlela yokusebenza. Zininzi izinto ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kubandakanya neempawu zesayikholoji yabathengi kunye neemfuno zentengiso, iimfuno zokhuselo lokusingqongileyo, ixabiso kunye nomsebenzi wokwoneliseka, itekhnoloji entsha kunye namandla okuthengisa, njl.
7.Imigaqo yokudityaniswa kweendlela zokupakisha kunye neendlela
Ukutya okunikiweyo, eyona ndlela ifanelekileyo yokupakisha kufuneka isetyenziswe emva kokukhetha izinto ezifanelekileyo zokupakisha kunye nezikhongozeli. Ukhetho lwetekhnoloji yokupakisha inxulumene ngokusondeleyo nezinto zokupakisha kunye nokubekwa kwindawo yentengiso yokutya okuhlanganisiweyo. Ukutya okufanayo kunokuhlala kusetyenziswa ubuchwephesha bokupakisha obahlukeneyo ukufezekisa imisebenzi efanayo yokupakisha kunye neziphumo, kodwa iindleko zokupakisha ziya kwahluka. Ke ngoko, ngamanye amaxesha, kuyadingeka ukudibanisa izinto zokupakisha kunye netekhnoloji yokupakisha ukulungiselela ukufezekisa iimfuno zokupakisha kunye neziphumo zoyilo.
Ukongeza, uyilo kunye nokukhethwa kwezinto zokupakisha ukutya zinokwenziwa ngokubhekisele kwinto esele ikhona okanye esele isetyenzisiwe yokutya eneempawu ezifanayo okanye ukutya okufanayo.